Articles in Education and Event & Entertainment | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
Articles in Education and Event & Entertainment
by Win MM Htay on 28 October, 2020
ရန်ကုန်မြို့၌ သီတင်းကျွတ် ကာလအတွင်း မီးရှူးမီးပန်းများ ဖောက်ပါက အရေးယူခြင်း ခံရမည်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း သီတင်းကျွတ် ကာလတွင် ဗြောက်အိုး၊ မီးရှူးမီးပန်းနှင့် မီးဒုံး (ရှူးဒိုင်း) များကို ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြန့်ချီခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ Read full article
by Thant Thant on 25 October, 2020
ကိုရီးယား၏ ယဉ်ကျေးမှု မြှင့်တင်ရေး ဂုဏ်ထူးဆောင် သံတမန်အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ခါရာမှ ခန့်အပ်ခြင်းခံရ
ကိုရီးယား ယဥ်ကျေးမှု မြှင့်တင်ရေး ဂုဏ်ထူးဆောင် သံတမန်သည် ကိုရီးယား-မဲခေါင် ဖလှယ်ရေးနှစ် (Mekong-ROK Exchange Year) ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တောင်ကိုရီးယား သံရုံးအနေဖြင့် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ခန့်အပ်သော သံတမန် ဖြစ်ပါသည်။ Read full article
by By Thant on 17 October, 2020
မြန်မာ-ကိုရီးယား သံတမန်ဆက်ဆံရေး (၄၅)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် အွန်လိုင်းမှ တိုက်ကွမ်ဒိုပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုက်ကွမ်ဒို အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ကိုရီးယားသံရုံးတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပမည့် မြန်မာ-ကိုရီးယား သံတမန် ချစ်ကြည်ရေး (၄၅) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Online Taekwondo Poomsae Championship 2020 ပြိုင်ပွဲကို Read full article
ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကာတွန်းတွေကို အသံထွက် ရုပ်ပြအနေနဲ့ Yoke Pya မှာ ပြန်လည်ခံစားနိုင်
ခေတ်လူငယ် တော်တော်များများရဲ့ ငယ်ဘဝ စာမျက်နှာတွေမှာ ရုပ်ပြ၊ ကာတွန်းစာအုပ်တွေ ဆိုတာ အမြဲတမ်း အတူရှိနေခဲ့တဲ့ ပျော်စရာလေးတွေ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Read full article
အမျိုးသမီးများ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်စေမယ့် Talk Show
၂၁ရာစုမှာတော့ အမျိုးသားတွေနဲ့အတူ ရင်ဘောင်တန်းပြီး အရာရာကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးများစွာ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ Read full article
on 11 October, 2020
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် နှစ်(၁၀၀) ပြည့်ပွဲအား အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် (၁၄)ရက်တိုင်တိုင် ပြုလုပ်ကျင်းပမည်
၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၃) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် နှစ် (၁၀၀) ပြည့် ပွဲတော်အား ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပြန်ကြားရေးနှင့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးတို့ ပူးပေါင်း၍ အောက်တိုဘာလ (၈)ရက်နေ့မှ (၃၁) ရက်နေ့အထိ အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို Read full article
on 06 October, 2020
၂၀ဝ၂ ခုနှစ်ရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ အကောင်းဆုံးစာပေဆုရ အိုဘယ့်အစိမ်းတို့မြေ (Book Review)
From the Land of Green Ghosts စာအုပ်ကို ဆရာသင့်လူက ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ Read full article
on 29 September, 2020
COVID ကာလမှာလုပ်စရာမရှိရင် ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ Series (7) ခု
Stay Home ကာလ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပြီလား? လုပ်စရာရှိသွားအောင် အခုပြောပြပေးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲ (၇) ခုကို ကြည့်လိုက်ပါ ... Read full article
Stay Home ကာလမှာ ဖုန်းထဲကနေအလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး Movies App (4)ခု
အိမ်မှာပဲနေနေရတော့ ပျင်းဖို့ကောင်းတာအမှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ အလွယ်တကူကြည့်နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး Movies App ( ) ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ရောဒီထဲက ဘယ် App တွေကို လတ်တလောသုံးဖြစ်လဲ…. Read full article
MLBB ရဲ့ Project Next Update မှာသိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အချက်များ
MLBB Developer Moonton ကနေပြီးတော့ Game ကိုတော်တော်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာမှ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ… Read full article
ဘဏ်ဖောက်တဲ့ကားတွေထဲက အကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမယ့် Money Heist
Money Heist လို့ခေါ်တဲ့ စပိန်စီးရီးဟာ လက်ရှိမှာ အရမ်းအောင်မြင်ပြီး တစ်နှစ်မှာ Season တစ်ခုထွက်ဖို့ လူတိုင်းစောင့်မျှော်နေရတဲ့ အရမ်းအောင်မြင်တဲ့ ဇတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ် Read full article
Netflix ကရုပ်ရှင်တွေကို အလကားကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Free Website များ
Netflix and chill ချင်တယ် billကျမပေးချင်ဘူးဆိုတဲ့ဂုန်းကောင်တို့အတွက် Read full article